BALCAD.NET-Shaxda ERDOGAN iyo Shidaalka Soomaaliya! – Balcad Online
BALCAD.NET-Shaxda ERDOGAN iyo Shidaalka Soomaaliya!
Posted by: Cabdiraxman naana in Balcad Tv, Gudaha, Wararka January 24, 2020
Balcad.net-24-janaayo-2020-Soomaaliya ayaa mar kale u tallaaba-qaadday ​ka faa’iidaysiga kheyraadka shiidaalka, kaddib markii Aqalka Sare ee Baarlamaanka uu ansixiyay January 6, 2020 Sharciga Batroolka dalka. Walow sharcigu uu soo raagay, haddana waxaa la filaayaa inuu soo jiidan doono maalgashiga shirkadaha shidaalka caalamiga ah.
Tobankii sanadood ee la soo dhaafay, waxaa si xoog leh looga helayay gaaska dabiiciga ah iyo saliidba, inta u dhaxeysa Mozambique iyo Kenya
Turkiga wuxuu ku soo galay Soomaaliya ujeeddooyin laysku ogaa, hase yeeshee isbeddelka siyaasadda Maraykanka ee ku jahaysnayd dagaalka xagjiriinta Geeska Afrika, ayaa diblomaasiyadda nabadda u gacan banneysay Boqortooyadda Sacuudiga iyo Imaaraadka Carbeed, iyadoo aan loo cayi​min xuduudaha ​ay ciyaari karaan.
Madaxweyne Erdogan, waxuu hurdada ka kiciyey shirkadaha shiidaalka ee quuddarraynaaya kheyraadka Soomaaliya, balse aan maalgashi diyaar u ahayn inay sameeyaan xilligan, sababo amni awgood
Previous: BALCAD.NET-Jubaland oo Soo Saartay Go’aan La Xiriira Hanaanka Doorashooyinka Qaranka
Next: BALCAD.NET-Mareykanka oo madax goboleedyada Soomaaliya u gudbiyey dalab culus